01/09/2018 admintriatra 0
Toa ny tamin’ireo tanàna nolalovany nandritra ny andro maromaro, dia noraisin’ny vahoakan’i Toliara tamin’ny horakora-pifaliana sy endrika miramirana ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly. Tamin’izany fandalovany tao Toliara izany indrindra no nitokanany ary nanolorany ny vahoakan’Atsimo …Tohiny
Tsy am-pihambahambana no nanambaran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina nanoloana ireo vahoaka an’alin-kisa nanotrona azy tao Toliara fa hitondra fampandrosoana avo 12 heny ho an’ny firenena ny tenany. « Mila mitodika amin’ny ho avy isika izao. Ny filoham-pirenena …Tohiny
Fotoam-bita : Misokatra amin’ ny lafiny rehetra ny Filoha
Kandidàn’ny fisokafana, izay no azo hamintinana ny fotoam-bita farany, tanterahin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina alohan’ny fametraham-pialany. Isan’ny nambaran’ ny Filoha fa « nalalaka ny firotsahan-kofidina , tsy nisy ny sakantsakana. Nahazo fankatoavana ireo nanaraka ny voalazan’ny didy …Tohiny
Anosibe : Trano hazo 20 rotiky ny afo
Nanao tohivakana ny hain-trano. Ankasina, Ankazomanga, Isoraka, Anjanahary no lasibatry ny hain-trano nandritry ny volana aogositra. Nahitam-pahavoazana tao anatin’ny ora vitsy ihany koa teny Anosibe ny harivan’ny zoma. Tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany …Tohiny